ANOSY-AMPEFILOHA-ANOSIBE : Olona roa mpivarotra “heroïne” voasambotry ny Polisy
Olona miisa roa mpivarotra zava-mahadomelina no voasambotry ny Polisy. 25 mars 2021
Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny Polisim-pirenena, nahazo loharanom-baovao avy amin’ny olona tsara sitra-po ny Polisy misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina etsy Anosy nilaza fa : “misy olona mivarotra Rongony maherivaika “Heroïne” sy rongony rarany eny amin’ny faritra Ampefiloha eny, amin’ny “La Réunion” kely sy eny Anosibe”.
Nidina avy hatrany nanao ny fanadihadiana sy fikarohana ny Polisy, ny talata 23 marsa 2021, ka vehivavy iray 20 taona no voasambotry ny Polisy tao an-tranony teny “La Réunion” kely, tokony ho tamin’ny 10 ora sy 45 mn. Rehefa nosavaina tao an-trano dia nahatratrarana rongony maherivaika na “Heroïne” 13 fonosana kely. Tamin’ny fanadihadiana azy dia niaiky izy fa mpivarotra ity “Heroïne” ity ary eny amin’ny “IVO” no fakany izany, ka teratany malagasy ihany no mpamatsy azy. Vidiany 3 000 Ariary ny fonosana kely iray ary amidiny 3 500 Ariary, mahalafo 7 fonosana isan’andro izy araka ny filazany ary vao herinandro no nanaovany ity asa ratsy ity.
Lehilahy iray 26 taona koa no voasambotry ny Polisy teny Anosibe io talata 23 Marsa 2021 io ihany, tokony ho tamin’ny 11 ora sy 45mn. Tratra teo am-pivarotana rongony mihitsy ity farany. Rehefa nosavaina teny aminy dia nahitana rongony 17 fonosana. Tamin’ny fanadihadiana azy koa dia niaiky izy fa azy ireo rongony ireo ka izany “Ndaty” izany no mpamatsy azy. Vidiany 200Ar sy 800Ar ny fonosana iray, ho an’ity faharoa voalaza ity dia amidiny 500Ar sy 1 000Ar avy eo. Nilaza izy fa vao roa volana no nanaovany ity asa ratsy ity ka izao tratra izao izy. Natolotra ny fampanoavana omaly alarobia, 24 marsa 2021 izy roa ireto ary andrasana ny tohiny.